Posted by သက်ဝေ at 2:45 AM
ညိမ်းနိုင် May 8, 2011 at 3:27 AM
Nyi Linn Thit May 8, 2011 at 4:11 AM
သူတို့က ဘာမှသိပုံ မရဘူးဆိုပေမယ့် သိခဲ့ရင်လည်း မျှမျှတတ ပြန်ပြီး ဘိုးနပ်စ်ပေးတဲ့ ဒီ chef ကိုတော့ နားလည်ခွင့်လွှတ်မှာ သေချာပါတယ်...။း)
T T Sweet May 8, 2011 at 5:21 AM
အကောင်အရှင်တွေ ရှမ်စောင်းမှာ ရောင်းတာ တွေ့ဖူးတယ်။ ကိုယ်လိုလူတွေချည်းပဲဆိ်ု အဲဒါတွေ သေမှ ရောင်းရမှာပဲ။
ငယ်ငယ်က အိမ်နားကဈေးမှာ အမေက ငရန့်ဆိုမှာတာ မသိတော့ ငါးရှဉ့် အရှင်တွေ အထွေးလိုက်ကြီး ၀ယ်ချလာတာ သတိရတယ်။ လွှတ်လဲ မပစ်ချင်တော့ အမေ့မှာ ငါးအရှင်တွေကို မကိုင်ချင့်ကိုင်ချင်နဲ့ ကိုင်လိုက်ရတာ။ သွေးသံရျဲရဲနဲ့။ အဲဒါကို ခုထိမျက်စိထဲမြင်နေမိတယ်။
ကိုယ်တိုင်သတ်ပြီး စားတဲ့သူတွေ ဘယ်လိုများ စိတ်ထဲ နေလဲ သိချင်စမ်းပါဘိ။
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) May 8, 2011 at 7:55 AM
ဒီမှာလည်း ငါးအရှင်တွေချည်း ရောင်းတာ
ဒါကြောင့် တစ်ဈေးလုံးက ငါးအရှင်တွေချည်း ရှိတယ်
ငါးအသေလိုချင်ရင် မနည်းဘဲ ရှာဝယ်ရတာ
တစ်နိုင်ငံနဲ့တစ်နိုင်ငံ လူတွေရဲ့ စိတ်သဘောထားချင်း မတူကြလို့ ဖြစ်လေမလားလို့ တွေးမိတယ်
ဒီလိုတွက်ကြည့်ရင် မြန်မာလူမျိုးတွေဟာ တစ်ခြားလူမျိုးနဲ့စာရင် အစားအသောက်အတွက် သူတစ်ပါးအသက်ရှင်ရက်ကို မစားချင်တာ ၉၀%လောက် ရှိမယ်ထင်ပါတယ်။
အမ အုန်းနို.သာကူ ဆိုတာ လုပ်နည်းလေး တင်ပေးပါလားနော်
Myagreen May 8, 2011 at 11:57 AM
မမ မြတ်စွာဘုရားကဟောထားတယ်။ မြင်သား ကြားသား မစားရဘူးတဲ့။ :) Chefကိုသာဓုခေါ်ပါတယ်။
ဆောင်း May 8, 2011 at 2:57 PM
ဘောနပ် လုပ်နည်းလေး တင်ပေးပါလား သာကူပြင်လုပ်နည်းပါ သိရင် တင်ပေးပါမသက်ဝေ
Good chef like me...:)
I'll try the desert:D
ရမ်းသမ်းကွတ်ထဲမှာကုိုယ်လည်းပါမယ်။ ချန်မထားနဲ့ ။ မှန်းရမ်းထဲ့တဲ့ ရမ်းသမ်းကွတ် အိုင်အိုရာ
ပွင့်မြုးဇင် May 9, 2011 at 8:42 AM
မမရေ.. ညီမလဲတူတူပဲ.. အရှင်တွေဆို မ၀ယ်ရဲဘူး.. ခုတလော ပူလို့ထင်တယ်.. အသားငါးတွေမစားချင်ဘူး.. အသီးအရွက်လေးတွေပဲစားဖြစ်နေတယ်..း)
ပန်းချီ May 9, 2011 at 9:15 AM
မနက်စောစောစီးစီး စားစရာသောက်စရာ အကြောင်းရေးထားတဲ့ပိုစ့် လာဖတ်မိတာ ကိုယ့်အမှား..ဂလု..ဂလု ဖြစ်ပြီးပြန်သွားရကြောင်းပါ..မမသက်ဝေး|
p.s ကျောက်ကျောပုံပြင်ကိုကြိုက်တယ်..နောက်တစ်ပုံ ကျောကျဦး..နော်..နော်..း))
Turn On Ideas May 9, 2011 at 12:28 PM
ပါဏာတိပါတ ကျူးလွန်တဲ့ အခါ မှာ….
၁။ သတ္တ၀ါလည်း ဖြစ်ရမယ်။
၂။ သတ္တ၀ါမှန်းလည်း သိရမယ်။
၃။ သတ်လိုသော စေတနာရှိရမယ်။
၄။သတ်ဖြတ်မှု လုံ့လတစ်ခုခုကို ပြုဖြစ်ရမယ်။
၅။ထိုလုံ့လကြောင့် ပင် သေသည်လည်း ဖြစ်ရမယ်၊
ဒီအဂါင်္ (၅)ပါး စုံမှ ပါဏာတိပါတ ကမ္မပထ (သတ်ခြင်းအမှု) မြောက်ပါတယ်။
၁။ မျက်စိ၊ နား၊ နှာခေါင်း အင်္ဂါခြေလက် ချွတ်ယွင်းခြင်း။
၂။ ဖြစ်ရာဘ၀မှာ ရုပ်အဆင်း အင်္ဂါ မွဲပြာခြောက်ညို၍ မစိုပြေခြင်း။
၄။လျှင်လျှင်မြန်မြန် ဖျတ်ဖျတ်လတ်လတ် မရှိခြင်း။
၅။ ဘေးရန် ပေါ်ပေါက်လျှင် ကြောက်ရွံ့တတ်ခြင်း။
၆။ သူများ အသတ်ခံရခြင်း၊ကိုယ်တိုင် အဆိပ်သောက်၍ သေရခြင်း။
၉။ အသက်တိုတတ်ခြင်း … စသည်ဖြင့် အပြစ်တွေ များလှပါတယ်။
၁။ ကိုယ်လက်အင်္ဂါ ပြည့်စုံခြင်း။
၂။ ရုပ်ဆင်း စိုပြည်တင့်တယ်ခြင်း။
၃။ အားအင် ပြည့်ဖြိုးခြင်း။
၅။ ဘေးရန်ကို မကြောက်မရွံခြင်း။
၆။ သူများလက်ချက်ဖြင့် အသက်မသေရခြင်း
၇။ အနာရောဂါ ကင်းခြင်း။
၉။အသက်ရှည်ခြင်း .. စတဲ့ အကျိုးတွေကို ရနိုင်ပါတယ်။
အရှင်တေဇနိယ ဆီမှ ဝေငှလိုက်ပါတယ်။
Ko Hmine May 9, 2011 at 12:28 PM
လှေလုပ်ဖို့ သစ်ပင်ကြီးခုတ်ရင်း နောက်ဆုံးကျ သွားကြားထိုးတံ ဖြစ်သွားတဲ့ ပုံပြင် သတိရပါ၏။
Peach Mon May 9, 2011 at 12:30 PM
ကကတစ်..ဈေးကြုံမှာမလို့ဟာ..အရှင်ဆိုလို့ နေပါစေတော့.. ကြက်ကင်နဲ့..မှိုပွင့်လတ်လတ်တွေ့ရင်..၀ယ်ခဲ့ပေးနော်။ ဈေးဖိုးတော့ နောက်မှ ယူတော့ ဟီး :D
Mie Nge May 9, 2011 at 12:31 PM
ခုတလောကိုယ့်ကိုယ်တွေ့နဲ့တူနေလို့ သဘောကျမိတယ် မသက်ဝေ .. ခလေးက ဂဏန်းကြိုက်တတ်လွန်းလို့ ( ဂဏန်းကလည်း အရှင်မှစားကောင်းတာလေ ) ဂဏန်းအရှင် တကောင် တကျပ်နဲ့ ၁၂ ကောင်ဝယ်ပြီး သတ်ခိုင်းလိုက်တယ် အိမ်ရောက်တော့ အမျိုးသားက အဲလိုသတ်ခိုင်းတာ သဘောမကျလို့ အဆူခ...ံလိုက်ရတယ် ပံ့သကူသားဘဲ စားပါတဲ့ .. ကိုယ်က အစ က မသိဘူးလေ အသားတွေ စားနေမှတော့ ဘာထူးလဲပေါ့ နောက်မှ ပံ့သကူဆိုတာ အိမ်ကလူပြောပြမှသိရတယ် ခုတော့ ခလေးပူဆာလည်း မကျွေးတော့ဘူး .. အပေါ်က သာကူလေးတော့ တအားသဘောကျတယ် ချက်နည်းပြောပြတာကျေးဇူးပါ ..See More
စော(အဝါရောင်မြေ) May 9, 2011 at 1:37 PM
Hop pot ကလည်း အများကြီးတော့ ထည့်စားရတာပါပဲလေ။
မိုးငွေ့...... May 9, 2011 at 2:24 PM
မမသက်နဲ့တောင် wet market လိုက်ချင်တာ...။
ချစ်ကြည်အေး May 9, 2011 at 4:21 PM
နောက်တခါ ချက်စားရင် ခေါ်လိုက်ပါ ဒါပါဗြဲ....:))
ညီမလေး May 9, 2011 at 10:21 PM
သာကူလုပ်နည်းသိသွားပြီ အဲ့ဟာ အရမ်းကြိုက်တယ် မလုပ်တတ်လို့ လုပ်တိုင်းလဲ မဖြစ်ဘူးရယ် ဟိဟိ အဲ့လိုတော်တား))
ဇွန်မိုးစက် May 10, 2011 at 11:36 PM
ဈေးဝယ်ထွက်ခြင်းဆိုလို့ တို့အမသက်ဝေ အော့ချက်မှာ ဈေးဝယ်ထွက်တယ်ထင်လို့... လက်စသတ်တော့ ရှန်စောင်းမှာ ဈေးဝယ်ထွက်တာကိုး။ အိမ်ဘယ်နားမှာလဲလို့ မှန်းကြည့်နေတယ်...ဟင်း..ဟင်း...
နောက်တစ်ခါ အုန်းနို့သာကူကျောက်ကျော လုပ်စားရင် လာစားလို့ရအောင်လို့ :P
P.S. အစ်မက လူလဲချစ်ဖို့ကောင်း၊ ရေးတဲ့စာတွေလည်း ချစ်ဖို့ကောင်း... နောက်တစ်ခါတွေ့ရင် မုန့်ဝယ်ကျွေးနော် :D
သဉ္ဇာ - Thinzar May 11, 2011 at 5:23 PM
သာကူနဲ့ အုန်းနို့က အဲလောက်လိမ်မာမှန်း မသိဘူး.. အစက သပ်သပ်စီကျိုပြီး ၂ထပ်လုပ်ထားသလား ထင်တာ။ အမ recipe တွေကို အဲလို ပုံပြင်လို ပြောပြပါလားဟင်.. အမရေးထားတာ ဖတ်ပြီး ချက်ချင်း လုပ်စားချင်စိတ် ပေါက်လာတယ် :)
Hmoo May 14, 2011 at 1:54 PM
Mon Petit Avatar May 14, 2011 at 7:59 PM
Anonymous May 16, 2011 at 2:20 AM
စားချင်တယ်.. ကျွေးပါ မမသက်ဝေ
Min Ko August 3, 2012 at 3:11 PM